Vaovao - Ahoana ny fanatsarana ny fahamarinan'ny milina fanodinana mandeha ho azy?
Mba hanatsarana ny fahamarinan'ny milina famolavolana mandeha ho azy, ny sisin'ny lohataona kely amin'ny tsipika fisarahana dia tantanana ary voahodina tsara. Mihazakazaka milamina sy azo ianteherana ny milina famolavolana ary ny rafitra hydraulic dia mitarika fandidiana azo antoka. Ny fitaovana dia manana manipulator, izay mampihena ny kalitaon'ny fitantanana avo lenta sy ny famokarana ary koa ny asa ilaina. Noho izany, ny famolavolana bobongolo dia tena zava-dehibe.
Ny milina famolavolana dia manana teknika maro. Amin'ny alàlan'ny fomba fitrandrahana, ny fasika famafazana dia mora miteraka fitrandrahana mandritra ny famokarana sarotra. Mora ampiasaina ireo teknolojia fampahalalana roa ireo, saingy tsy fomba tsara hanamboarana lasitra ny tenanao. Ao amin'ny fomba famolavolana boaty mangatsiaka, ny haben'ny bobongolo dia azo ahitsy mba hampihenana ny vidin'ny bobongolo sy ny fatorana fasika. Ny vidin'ny catalyst sand dia avo be ihany koa. Ny haavon'ny fifamatorana ny fasika maitso, ny fihenan'ny teknolojia famolavolana boaty mangatsiaka.
Ny fomba mahazatra amin'izao fotoana izao dia ny fampiasana fomba famolavolana boaty mangatsiaka ho an'ny casting miaraka amina endrika sy habe sarotra. Ho fanampin'izay, ampitahaina amin'ny fantsom-bary vita amin'ny fasika amina orinasa maro firaka Co., Ltd. Izy io dia azo jerena amin'ny asa fanaovana ny fotony fa noho ny simia resin sy ny milina famolavolana boaty tsy miovaova, ny famoahana kalitao avo lenta dia azo vokarina amin'ny vidiny ambany, izay manatsara kokoa ny tsipika famokarana paompy sy robot, ary mampihena ny isan'ny fandefasana entana vokarina amin'ny vidiny ambany. Asa ilaina. Ny fantsom-panafody milina mangatsiaka matevina dia manatsara ny fampandrosoana ara-toekarena.
Sandbox, Masinina fanodinana semi-mandeha ho azy, Milina Punch Out, Famolavolana koveta fanariana, Masinina bobongolo, Famolavolana tavoahangy,